Siilaanyo oo golahiisa Wasiiradda Iyo Agaasimayaasha Guud ee wasaaradaha ku Amray inuu Xilka ka Tago Qofkii aan Muuse Biixi Niyad u hayn kadib shirkii golaha wasiirada ee shalay | Saxil News Network
Siilaanyo oo golahiisa Wasiiradda Iyo Agaasimayaasha Guud ee wasaaradaha ku Amray inuu Xilka ka Tago Qofkii aan Muuse Biixi Niyad u hayn kadib shirkii golaha wasiirada ee shalay
Hargeysa ( SAXILNEWS/ Yool)_Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa golihiisa Wasiiradda, Maareeyayaasha iyo Agaasimayaasha guud ee hay’adaha Dawlada, waxa uu ku amray inuu shaqada ka tago qofkii aan si niyadsami leh ugu shaqaynayn rabitaanka hoggaanka iyo Siyaasadda Xisbiga tallada haya ee KULMIYE. Ma jiro war faahfaahsan oo kasoo baxay qasriga Madaxtooyadda oo si cad arrintan u iftiiminaya.
Hase-ahaa-tee, xoggoWargeyska Yool u ka helay ilo ku dhow-dhow fadhi gaar ah oo Madaxweyne Siilaanyo Madaxtooyadda Shalay kula yeeshay golihiisa Wasiiradda iyo Masuuliyiinta madaxda ka ah Hay’adaha Dawlada, waxa ay tibaaxen in markii Madaxweyne Siilaanyo si guud uga warsaday hawl-wadeenadiisa warbixinaha hay’adahooda, kaddib aakhirkii uu amray Masuuliyiinta uu kulanka la qaatay, inay si buuxda ugu shaqeeyan rabitaanka iyo Siyaasadda Musharraxa Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi. Waxana xoggaha kulanka laga helay intaa ku darreen in Madaxweynuhu masuuliyiinta u kulanka la lahaa usoo bandhigay inay kala doortaan inay xilka ka tagaan iyo taageerada Musharraxa cusub ee Xisbul xaakimka.
Geesta kale, Warsaxaafadeed xalay kasoo baxay qasriga Madaxtooyada kuna saxeexan yahay afhayeenka cusub ee Madaxtooyadda, ayaa xaqiijiyey jiritaanka kullankan Madaxweynaha, Wasiirada,Wasiirul dawlayaasha, Wasiir ku-xigeenada, Agaasimayaasha guud ee wasaaraddaha dalka oo dhan. Waxa kaloo, warsaxafadeedka lagu sheegay intii kulanku socday in Madaxweynaha iyo masuuliyiintu is weydaarsadeen afkaaro iyo aaraah dulucoodu tahay sidii loo dardar gelin lahaa hawlaha qaranka, sidoo kale, qaabkii loo xoojin lahaa isfahanka iyo hanaanka wada shaqayneed ee u xidheexaya Wasiiradda iyo agaasimayaasha guud. Ugu danbeyn sida warsaxafadeedka lagu sheegay, waxa Madaxweynuhu kulanka kusoo afmeeray, hadallo iskugu jiray dardaaran, duco iyo dhiiri-gelin u jeediyey Masuuliyiinta waaxda fulinta.
Haddaba, sida uu dhigayo Xeer nidaamka ururada iyo asxaabta Siyaasadda XEER No. 14/2011 qodobka 14, farqadihiisa 1, 2, 3, iyo 4-aad, waxa ka reeban shaqaalaha dawlada sida Maareeyaasha iyo Agaasimayaasha guud ee Wasaaraddaha iyo Hay’adaha fulinta. Inay furtaan ururo siyaasadeed ama kamid noqdaan, sidoo kale, in loo magacaabo Xafiis urur Siyaasadeed, iyo weliba inay ku lug yeeshan arriimo asxaab ama urur, taasoo hadii ay dhacdo lumin kartaa dhex-dhexaadnimada Xafiiska uu joogo. Waxa kaloo ka reeban taageerida ama kasoo hor-jeedsi Xisbi ama Urur Siyaasadeed.
Qodob kaasi oo faah-faahsana waxa uu dhignaa sidan: Qodobka 14aad: Reebbanaan
Uma banaana qof kasta oo ka tirsan Ciidammada Qalabka sida: Ciidanka qaran, Booliska,
Ciidanka Asluubta, hay’adaha sirdoonka qaranka, Ururada aan Dawliga ahayn, shaqaalaha
dowlada (civil servant) iyo xubnaha ka tirsan Garsoorka, Xeer-ilaalinta, iyo gudidda
diwaan galinta ururada siyaasada iyo ansixinta xisbiyada qaranka in ay:
1. Samaystaan Urur Siyaasadeed iyo xubin ka-noqoshadiisaba.
2. In loo magacaabo xafiis Urur Siyaasadeed.
3. Ku lug-yeelato arrimo Axsaab/Urur oo luminaaya dhex-dhexaadnimada xafiiska uu joogo.
4. Taageerid ama ka-soo-hor-jeedsi Xisbi/Urur Siyaadadeed..”.
Haddaba, sida qodobada Xeerkani dhigayan, waxa muuqata in tallaabadan Madaxweynuhu ku amrayo Maareeyaasha iyo Agaasimayaasha guud ay tahay mid si cad uga hor imaneysaa shuruucda iyo xeerarka Qaranka u degsan, waxa kaloo, iyana tallaabadani ka markhaati kacaysaa sida Xukuumada tallada haysa ugu tumato Dastuurka iyo shuruucda ka farcamay.
Maha markii ugu horreysay ee Masuuliyiin ka tirsan shaqaalaha dawladu ee siyaasadda ka caagan Xukuumadda tallada haysaa ku dhex misho arrimaha Siyaasadda, kuna booriso inay ka dhex muuqdan shirarka Xisbiga KULMIYE, isla markana u hawl-galaan sidii ay taageero ugu raadin lahaayeen, hase-yeeshee waxa arrimahan oo dhammi suurta galiyey qararkii Madaxweynuhu ku xalaaleyey Ninkasta oo Xukuumada ka tirsan oo hayaa xil wasiir ama agaasime inuu si toosa ah xubin uga noqonaayo golaha dhexe ee Xisbiga KULMIYE, halka Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka xubinnimadooda ay ku helayaan marka ay Xisbiga Codsi usoo qortaan.
Arrimahan oo dhan ayaa marka la isku geeyo, waxa ay marag fur buuxa u yihiin in Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ku tallo gashay in Somaliland noqoto dal lamid ah Wadamadii Nidaamka Shuucigu ka talin jiray, isla markana aan laga ogolayn inuu ka hirgalo nidaamka Asxaabta badan ee ku saleysan Doorashooyinka laga baxo Codka hal-dheeri ah. Waxa kaloo, la tijaabiyey in Nidaamkan Madaxweyne siilaanyo iyo Xisbigiisu ku dhaqmayaan uu khatar ku yahay sinaanshaha Nolosha Bulshada, isla markana uu abuuro Nolool ku dhisan nidaamka hanti goosiga, oo Bulshada u kala saaraya laba dabaqadood oo ah mid Cirka joogta iyo mid beerka dhulka ku haysaa